ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ - Forex Lens
၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသည်ငှားရမ်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ၀ င်ရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်သုံးစွဲသူ၏ဖောက်သည်များ၏ဒေတာဘေ့စ်အချက်အလက်များအားမည်သည့်နည်းနှင့်မျှအသုံးပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုတတ်နိုင်သမျှအမြင့်ဆုံးလျှို့ဝှက်ထားမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်သူများ၏အီးမေးလ်လိပ်စာများ၊ စားသုံးသူများ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုသည့်မည်သည့်စာမျက်နှာများကိုစုစည်းထားသည့်သတင်းအချက်အလက်၊ အနီးစပ်ဆုံးတည်နေရာ၊ IP လိပ်စာနှင့်စားသုံးသူမှစေတနာ့ဝန်ထမ်းသတင်းအချက်အလက်များ (ဥပမာစစ်တမ်းအချက်အလက်နှင့် / သို့မဟုတ်ဆိုက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း) ။ ကျွန်ုပ်တို့စုစည်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေရန်အသုံးပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသူများအတွက်သင်၏အမည်၊ ကုမ္ပဏီအမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ ငွေတောင်းခံရန်လိပ်စာနှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်အချက်အလက်စသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ပါအထွေထွေရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ငွေတောင်းခံခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်း၊
ကွတ်ကီးသည်အချက်အလက်အနည်းငယ်သာဖြစ်ပြီးမကြာခဏအမည်မဖော်ပြသောထူးခြားသောအမှတ်အသားပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ကွန်ပြူတာများမှသင့်ဘရောက်ဇာသို့ပို့။ သင့်ကွန်ပျူတာ၏ hard drive တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်ကွတ်ကီးများလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိ session သတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်တမ်းတင်ရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်၊ သို့သော်အမြဲတမ်း cookies များကိုမသုံးပါ။
ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု၊ သိုလှောင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နည်းပညာများကိုထောက်ပံ့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်တတိယပါတီရောင်းချသူများနှင့် hosting မိတ်ဖက်များကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုဒ်၊ ဒေတာဘေ့စ်များနှင့်လျှောက်လွှာအတွက်အခွင့်အရေးအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သော်လည်းသင်၏အချက်အလက်အားလုံးကိုသင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
ဆင့်ခေါ်မှုများကိုလိုက်နာခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ၀ န်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များကိုချိုးဖောက်ခြင်းကဲ့သို့သောအထူးအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမူဝါဒအားအခါအားလျော်စွာအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းပြုနိုင်ပြီးသင်၏အကောင့်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောမူလအီးမေးလ်သို့အသိပေးခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်ထင်ရှားသောအသိပေးခြင်းအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ပြုမူသည်နှင့် ပတ်သက်၍ သိသာသောပြောင်းလဲမှုများအကြောင်းသင့်အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ ဤသည်ဖြစ်ရပ်အတွက်အချက်အလက်လွှဲပြောင်းပါဝင်သည် Forex Lens ကဝယ်ယူသို့မဟုတ်အခြားကုမ္ပဏီနှင့်အတူပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီသည်သူတို့၏ 'ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်' (PII) ကိုအွန်လိုင်းတွင်မည်သို့အသုံးပြုနေသည်နှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်သူများအားပိုမိုကောင်းမွန်စွာဝန်ဆောင်မှုပေးရန်ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည်။ PII သည် US privacy law နှင့် information security တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့၎င်းသည်သူကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကို သုံး၍ လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖော်ထုတ်ရန်၊ အဆက်အသွယ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်နေရာတစ်ခုသို့လူတစ် ဦး ကိုဖော်ထုတ်ရန်သုံးနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အညီသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့စုဆောင်းအသုံးပြုသည်၊ ကာကွယ်သည်သို့မဟုတ်မည်သို့ကိုင်တွယ်သည်ကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်, က်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ် app ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုသောလူစုထဲကပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘယ်အချက်အလက်စုဆောင်းသလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အမှာယူသောအခါ (သို့) မှတ်ပုံတင်သည့်အခါသင့်အတွေ့အကြုံနှင့်သင့်အားကူညီရန်သင်၏အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ စာတိုက်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်အချက်အလက်၊ လူမှုလုံခြုံရေးနံပါတ်၊ စိတ်ကြိုက်အကွက်များ (သို့) အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုနိုင်သည်။
သငျသညျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင် register တစ်ခုအမိန့်ကိုနေရာတစ်သတင်းလွှာစာရင်းသွင်း, စစ်တမ်းတစ်ခုတုံ့ပြန်တဲ့ပုံစံကိုအသုံးပြုခြင်းတိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းထုတ်ဖြည့်ပါ, တစ်ဦးပံ့ပိုးမှုလက်မှတ်ကိုဖွင့်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်သတင်းအချက်အလက်ဝင်သောအခါငါတို့သည်သင်တို့ထံမှသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများအပေါ်ပြန်လည်တုံ့ပြန်ချက်များပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးပါ Browse
သငျသညျမှတျပုံတငျတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းလွှာများအတွက် sign up ကိုစစ်တမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်သွယ်ရေးတုံ့ပြန်, ဝက်ဘ်ဆိုက်ရယူရန်, ဒါမှမဟုတ်အောက်ပါနည်းလမ်းအချို့နဲ့အခြား site ကိုအင်္ဂါရပ်တွေကိုအသုံးပြုပါ, တစ်ဦးကိုဝယ်ယူဖြစ်စေလျက်, ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှစုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်များသုံးနိုင်ပါသည်:
• သင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံ personalize ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျအများဆုံးစိတ်ဝင်စားကြရသောအကြောင်းအရာနှင့်ထုတ်ကုန်ဟာယယဇ်ပူဇော်အမျိုးအစားကိုမကယ်မလွှတ်ခွင့်ပြုပါရန်။
• ပိုကောင်းသငျသညျအစေခံနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုတိုးတက်စေရန်။
• ပြိုင်ပွဲ, မြှင့်တင်ရေး, စစ်တမ်းသို့မဟုတ်အခြား site ကိုအင်္ဂါရပ်စီမံခန့်ခွဲရန်။
• လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ process ရန်။
• ratings နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များ၏သုံးသပ်ချက်များကိုအဘို့အမေးရန်
• စာပေးစာယူ (တိုက်ရိုက်စကားပြောခန်း, အီးမေးလ်သို့မဟုတ်ဖုန်းကိုမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ) အပြီးသူတို့နှင့်အတူတက်လိုက်လျှောက်ရန်
ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုတတ်နိုင်သမျှကျွန်ုပ်တို့၏ site ရန်သင့်အလည်အပတ်ခရီးအဖြစ်လုံခြုံစေနိုင်ရန်အတွက်လုံခြုံရေးပေါက်တွေနဲ့လူသိများအားနည်းချက်များများအတွက်ပုံမှန် scan ဖတ်နေပါတယ်။
ကျနော်တို့ပုံမှန် Malware Scanning ကိုအသုံးပြုပါ။
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံမှုကွန်ရက်များနောက်ကွယ်တွင်ပါရှိသောနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစနစ်များအထူးရယူသုံးစွဲခွင့်ရှိသည်, လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များ၏ကန့်သတ်အရေအတွက်အားဖြင့်သာသုံးစွဲနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျထောက်ပံ့အားလုံးအထိခိုက်မခံ / အကြွေးသတင်းအချက်အလက် Secure Socket Layer (SSL) ကိုနည်းပညာကနေတဆင့်စာဝှက်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူတစ်ဦးအနေနဲ့အမိန့်, ဝင်သောတင်ပြခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏လုံခြုံမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့သူတို့ရဲ့သတင်းအချက်အလက် access လုပ်ပါတယ်နေရာရသောအခါကျနော်တို့ကလုံခြုံရေးအစီအမံအမျိုးမျိုးအကောင်အထည်ဖော်ရန်။
အားလုံးအရောင်းအတစ်တံခါးပေါက် provider ကမှတဆင့်လုပ်ငန်းများ၌နေကြတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများပေါ်တွင်သိမ်းထားတဲ့သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းများ၌ကြသည်မဟုတ်။
ကျနော်တို့က 'cookies တွေကို' 'ကိုအသုံးပြုဖို့ပါသလား
ဟုတ်တယ်။ ကွတ်ကီးများဆိုသည်မှာဆိုက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသည်သင်၏ဘရောက်ဇာမှတစ်ဆင့်သင်၏ကွန်ပြူတာ hard drive သို့လွှဲပြောင်းပေးသောဖိုင်ငယ်များ (အကယ်၍ ခွင့်ပြုလျှင်) ဆိုဒ်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသူများ၏စနစ်များကိုသင်၏ဘရောက်ဇာကိုမှတ်မိစေရန်နှင့်အချို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်နှင့်မှတ်မိစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏စျေး ၀ ယ်လှည်းပေါ်ရှိကုန်ပစ္စည်းများကိုမှတ်မိစေရန်နှင့်ကူညီရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီပေးသောယခင်သို့မဟုတ်လက်ရှိ site လှုပ်ရှားမှုအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏ကြိုက်နှစ်သက်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အားနားလည်စေရန်၎င်းတို့ကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အနာဂတ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သော site အတွေ့အကြုံများနှင့်ကိရိယာများကိုပေးနိုင်ရန်စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်နှင့် site အသွားအလာနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုစုစည်းရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။
• အနာဂတ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန် site ကိုအတွေ့အကြုံများနှင့် tools တွေကိုပူဇော်နိုင်ရန်အတွက် site ကိုအသွားအလာနှင့် site interaction ကအကြောင်းကိုစုစုပေါင်း data တွေကို compile ။ ကျနော်တို့သည်လည်းငါတို့ကိုယ်စားဤသတင်းအချက်အလက်ကိုခြေရာခံကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချရသော Third-party န်ဆောင်မှုများသုံးနိုင်ပါသည်။
ကွတ်ကီးတစ်ခုပို့နေတိုင်းသင်၏ကွန်ပြူတာကိုသတိပေးခိုင်းလိမ့်မည်သို့မဟုတ်ကွတ်ကီးအားလုံးကိုပိတ်ထားနိုင်သည်။ သင်၏ဘရောင်ဇာဆက်တင်များမှတဆင့်ပြုလုပ်သည်။ သင်၏ browser သည်အနည်းငယ်ကွဲပြားသောကြောင့်သင်၏ cookies များကိုပြုပြင်ရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းကိုလေ့လာရန်သင့် browser ၏ Help Menu ကိုကြည့်ပါ။
အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ browser မှာ cookies များကို disable လျှင်:
အကယ်၍ သင်သည် cookies များကိုပိတ်ထားလျှင်၎င်းသည် site ၏အင်္ဂါရပ်အချို့ကိုပိတ်လိမ့်မည်။
သို့သျောလညျးကို non-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်ဧည့်သည်သတင်းအချက်အလက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ကြော်ငြာ, သို့မဟုတ်အခြားအသုံးပြုမှုအခြားပါတီများပေးနိုင်ပါသည်။
ရံဖန်ရံခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင် Third-party ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုပါဝင်သည်သို့မဟုတ်ပူဇော်စေနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကား Third-party က်ဘ်ဆိုက်များသီးခြားနှင့်လွတ်လပ်သော privacy ကိုမူဝါဒများရှိသည်။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ထိုအဆက်နွယ်နေဆိုဒ်များ၏အကြောင်းအရာနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအဘို့အဘယ်သူမျှမတာဝန်သို့မဟုတ်တာဝန်ယူမှုရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ငါတို့သည်ငါတို့၏ site ၏သမာဓိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ရှာဤဆိုဒ်များအကြောင်းကိုမဆိုတုံ့ပြန်ချက်ကြိုဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင် Google AdSense Advertising ကြော်ငြာကိုအသုံးပြုပါ။
• Google AdSense နှင့်အတူ Remarketing
• အစီရင်ခံ Google ကပြရန်ကွန်ယက်ရလဒ်ပြသမှု
• DoubleClick ပလက်ဖောင်းပေါင်းစည်းရေး
ထိုကဲ့သို့သော Google နဲ့အသုံးပြုသူ interaction ကနှင့် ပတ်သက်. ဒေတာ compile လုပ်ဖို့အတူတူ (ထိုကဲ့သို့သောကို Google Analytics မှ cookies များကိုကဲ့သို့) ပထမဦးဆုံးပါတီ cookies နဲ့ (ဥပမာ DoubleClick cookie ကိုကဲ့သို့) Third-party cookies တွေကိုသို့မဟုတ်အခြား Third-party ဖေါ်ထုတ်ကိုအသုံးပြုဖို့အဖြစ် Third-party ရောင်းချသူနှင့်အတူကျွန်တော်တို့သည် သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုဆက်စပ်အဖြစ်ကြော်ငြာဆွဲဆောင်မှုများနှင့်အခြားကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာ။
အသုံးပြုသူများသည် Google က Google ကကြော်ငြာ Settings စာမျက်နှာကိုသုံးပြီးသင်ကို advertise ပုံကိုများအတွက်ဦးစားပေးသတ်မှတ်နိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်, သင်ကွန်ယက် Advertising ကြော်ငြာ Initiative Opt ထဲကစာမျက်နှာသို့သွားရောက်ခြင်းဖြင့်သို့မဟုတ် Google Analytics မှ Opt ထဲက Browser ကိုအပေါ်ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဖယ်ထုတ်လို့ရပါတယ်။
CalOPPA သည်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကိုတင်ရန်စီးပွားဖြစ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုလိုအပ်သောပထမဆုံးပြည်နယ်ဥပဒေဖြစ်သည်။ ဥပဒေအရလူအများသိရှိနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြု၍ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆိုမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်မည်သည့်ကုမ္ပဏီမှမဆိုလိုအပ်သည်။ တစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းကိုမျှဝေသုံးစွဲနေကြသည်။ - အသေးစိတ်ကို http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf တွင်ကြည့်ရှုပါ။
အသုံးပြုသူများသည်အမည်ဝှက်ကျွန်ုပ်တို့၏ site သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဒီကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာမူဝါဒနေသူများကဖန်တီးပြီးတာနဲ့ငါတို့သည်ငါတို့၏က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးသိသာထင်ရှားသောစာမျက်နှာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပင်မစာမျက်နှာပေါ်တွင်သို့မဟုတ်နိမ့်ဆုံးအဖြစ်က link တစ်ခုပေါင်းထည့်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ link တွင် 'Privacy' ဟူသောစကားလုံးပါရှိပြီးအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာမျက်နှာတွင်အလွယ်တကူတွေ့ရှိနိုင်သည်။
• သင့်ရဲ့အကောင့်ကို logging အားဖြင့်
ဘယ်လိုကျွန်ုပ်တို့၏ site လက်ကိုင်အချက်ပြမှုများကိုခြေရာမခံပါနဲ့ပါသလဲ?
ကျနော်တို့အချက်ပြမှုများကိုခြေရာမခံပါနဲ့နှင့်ခြေရာမခံပါနဲ့, စက်ရုံ cookies များကို, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး Do Not Track ကို (DNT) ဘရောက်ဇာယန္တရားအရပ်၌ရှိရသောအခါကြော်ငြာကိုအသုံးပြုဖို့အားချီးမြှောက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ site Third-party အပြုအမူခြေရာခံခြင်းခွင့်ပြုပါသလား
ကျနော်တို့အထူးဟောင်း 13 နှစ်ပေါင်းနှစ်အောက်ကလေးများစျေးကွက်ပါဘူး။
အဆိုပါတရားမျှတသောသတင်းအချက်အလက်အလေ့အကျင့်မူများကိုဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေများကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍရှိသည်ဟုအမေရိကန်နှင့်သူတို့ပါဝင်သည်သဘောတရားများအတွက် privacy ကိုပညတ်တရား၏ကျောရိုးဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အဆိုပါတရားမျှတသောသတင်းအချက်အလက်အလေ့အကျင့်အခြေခံမူကိုနားလည်ခြင်းနှင့်မည်သို့သူတို့အကောင်အထည်ဖော်ရပါမည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ပေးသောအမျိုးမျိုးသော privacy ကိုဥပဒေများကိုလိုက်နာရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
• 1 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ရက်အတွင်းမှာပဲ
ကျနော်တို့ In-site ကိုအကြောင်းကြားစာမှတဆင့်အသုံးပြုသူများကိုအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်
ငါတို့သည်လည်းတစ်ဦးချင်းစီတရားဝင်တရားလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်သူကိုဒေတာစုဆောင်းနှင့်ပရိုဆက်ဆာဆန့်ကျင်အတည်ပြုအခွင့်အရေးများကိုလိုက်ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်လိုအပ်သည်သောတစ်ဦးချင်းခံစားရတဲ့နစ်နာမှုနိယာမသဘောတူသည်။ ဤသည်မှာနိယာမတစ်ဦးချင်းစီဒေတာအသုံးပြုသူများကိုဆန့်ကျင်အတည်ပြုအခွင့်အရေးများရှိသည်သာလိုအပ်သော်လည်းကိုလည်းတစ်ဦးချင်းစီစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့် / သို့မဟုတ် data ကိုပရိုဆက်ဆာအားဖြင့် Non-လိုက်နာမှုတရားစွဲဆိုဖို့တရားရုံးသို့မဟုတ်အစိုးရအေဂျင်စီများမှပြန်လည်ကုရှိသည်။
အဆိုပါ CAN-SPAM အက်ဥပဒေ, စီးပွားဖြစ်အီးမေးလ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသတ်မှတ်မယ့်တရားကိုစီးပွားဖြစ်မက်ဆေ့ခ်ျအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုတည်စေလက်ခံသူများအီးမေးလ်များသူတို့ကိုစလှေတျတျောခံရခြင်းမှရပ်တန့်ခြင်း, ချိုးဖောက်မှုများအဘို့ခက်ခဲတဲ့ပြစ်ဒဏ်များရှင်းလင်းပြောပြရှိသည်ဖို့လက်ျာပေးသည်။
• မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များတုံ့ပြန်, သတင်းအချက်အလက် Send နှင့် / သို့မဟုတ်အခြား requests သို့မဟုတ်မေးခွန်းများကို
• အမိန့်နှငျ့ပတျသကျသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်မွမ်းမံမှုများပေးပို့ဖို့ Process ကိုအမိန့်နဲ့။
• သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုသင် Send
• မူရင်းငွေပေးငွေယူဖြစ်ပွားခဲ့သည်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အီးမေးလ်များကိုပေးပို့ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးလ်စာရင်း Market ကသို့မဟုတ်ဆက်လက်။
CANSPAM နှင့်အညီဖြစ်စေရန်, ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါအချက်များကိုရန်သဘောတူ:
• ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းသို့မဟုတ် site ကိုဌာနချုပ်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာပါဝင်သည်။
• တဦးတည်းကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါက, လိုက်နာမှုများအတွက် Third-party အီးမေးလ်ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးန်ဆောင်မှုများစောင့်ကြည့်။
• လျင်မြန်စွာဂုဏ်အသရေဘေးဖယ်ထုတ် / ယူမှုဖျက်တောင်းဆိုမှုများ။
• အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးချင်းစီကိုအီးမေးလ်၏အောက်ဆုံးမှာလင့်ခ်ကို အသုံးပြု. နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန်။
ကျနော်တို့ချက်ချင်းထံမှသင်ဖယ်ရှားဦးမည် အားလုံး စာပေးစာယူ။
ဒီကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိပါတယ်လျှင်သင်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။
250 Yonge လမ်း # 2201
တိုရွန်တို, အွန် M5B2M6
DBA Forex Lens Inc က
250 Yonge St. Suite 2201၊